मिलाप सम्मानमा राजेश पायलले के पाएनन् ? « Ramailo छ
मिलाप सम्मानमा राजेश पायलले के पाएनन् ?
नेपाली गायनका मेगास्टार राजेशपायल राईलाई ‘मिलाप सम्मान’ गरिएको छ । उनलाई आइतबार एक विशेष कार्यक्रमबीच मिलाप सम्मान गरिएको हो । सम्मान कार्यक्रममा यी नेपाली गायनका मेगास्टारले भने, ‘मैले सबै थोक पाएँ । तर जीवनमा एकथोक पाउन सकेको छैन ।’ राजेशपायलको यस्तो संकेत विवाह तिर रहेको बुझ्न सकिन्छ । हालसम्म उनी अविवाहित नै छन् ।
हालै मात्र अमेरिकामा सम्मानित भएका राजेश पायललाई त्यसै सन्दर्भमा मिलाप म्यागजिनले सम्मान गरेको हो । नेपाली गायनमा उनी ‘राई इज किङ’ हुँदै ‘मेगास्टार’ को रुपमा चर्चित छन् । राई ईज किङलाई अमेरिकाको रोचेस्टर सिटीले सम्मान गर्दै ‘अन्तर्राष्ट्रिय पप गायक’ को उपाधि दियो । राजेशपायलको नाममा प्रत्येक ५ नोभेम्बर ५ लाई ‘राई इज किङ’ को नाममा फेस्टिवल मनाउने घोषणा समेत गरेको छ । यो आम नेपालीका लागि खुसी खबर हो ।